android ဖုန်းအခမဲ့ဖလက်ရှမီး App ကို | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » အခမဲ့ဖလက်ရှမီး App ကို
အခမဲ့ဖလက်ရှမီး App ကို APK ကို
ဤသည်လက်နှိပ်ဓာတ်မီးလုံးဝအခမဲ့ (ကြော်ငြာ-supported) တစ်ပြောင်ပြောင်တောက်သောအလင်းရှိပြီးအစာရှောင်ခြင်းစတင်သည်သည်။ အဆိုပါ user interface ကို, ကြော့ရိုးရှင်းပြီးအားလုံးလက်နှိပ်ဓာတ်မီး apps တွေရဲ့အလှဆုံးပါပဲ။ ကျနော်တို့တိုင်းအသေးစိတ်အာရုံစိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာယခုတိုင်အောင်, ဒီဇိုင်းဖွံ့ဖြိုးနှင့်ဤလက်နှိပ်ဓာတ်မီးကို update လုပ်ဖို့ 315 နာရီထက် ပို. ယူ! ယခု Download, သင်ကလက်နှိပ်ဓာတ်မီးလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်လာသောအခါသင်သိဘယ်တော့မှလို့ပဲ။
+ တကယ်မြန်ဆန်စွာစတင်။ 1.3 စက္ကန့် (ဖုန်းမှ), (sdcard ထံမှ) 1.6 စက္ကန့်။ တစ်ဦးကို HTC Wildfire S ကိုအပေါ်ကိုစမ်းသပ်
+ အလွန့်အလွန်အစာရှောင်ခြင်းတွင်-OFF အလင်း Toggle
+ အမြင့် resolution ကို (HD) display ကိုထောက်ခံကြောင်း
+ အချို့သောအခြားလက်နှိပ်ဓာတ်မီး apps များနှင့်မတူဘဲအလင်းအရင်းအမြစ်အဖြစ်ဦးဆောင်သည့်ကင်မရာ flash ကိုသုံးသည်။
အားလုံးလက်နှိပ်ဓာတ်မီး apps တွေရဲ့ + အများစုကလှပရိုးရှင်းပြီးကြော့ user interface ကို
+ sdcard installation ကိုထောက်ခံကြောင်း
ဤသည်လက်နှိပ်ဓာတ်မီးနဲ့အခြားလက်နှိပ်ဓာတ်မီး apps များထက် သာ. ကောင်း၏အမှုအရာတွေအများကြီးပဲ။ ဒါဟာ spyware တွေရဲ့ install သို့မဟုတ်သင့်အင်တာနက်ဘရောက်ဇာကိုပင်မစာမျက်နှာသို့မဟုတ် search engine ကိုပြောင်းလဲပစ်မထားဘူး။ ဤသည်လက်နှိပ်ဓာတ်မီးသင့်အိမ် screen ပေါ်မှာမလိုချင်တဲ့ဖြတ်လမ်း icon တွေကို install လုပ်မထားဘူးကြောင့်ဘက်ထရီကြောင်းန်ဆောင်မှုများစတင်အလိုအလျှောက် install လုပ်မထားဘူး။ ဤသည်လက်နှိပ်ဓာတ်မီးကင်မရာ flash ကိုအလင်းအရင်းအမြစ်အဖြစ်ဦးဆောင်ကိုအသုံးပြုသည်ထို့ကြောင့်အလင်းအရင်းအမြစ်အဖြစ်အစား display ကိုအသုံးပြုလက်နှိပ်ဓာတ်မီး apps များထက်အများကြီးပိုမိုတောက်ပသည်။
Network ကိုဆက်သွယ်မှု, အပြည့်အဝအင်တာနက်:
ဒီအခွင့်ပြုချက်အင်တာနက်ကနေကြော်ငြာတွေကို download လုပ်နိုင်တော့မည်ဖို့လက်နှိပ်ဓာတ်မီးများကလိုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါကြော်ငြာကိုဒီကယ့်ကိုကောင်းတဲ့လက်နှိပ်ဓာတ်မီး၏ developer များ၏တစ်ခုတည်းသောဝင်ငွေစီးဖြစ်ကြောင်း, ဒါကြောင့်သူတို့ကိုပိတ်ဆို့ကြဘူးပါ။
System ကိုကိရိယာများ, အိပ်ထဲကနေဖုန်းကိုကာကွယ်ပါ:
ဦးဆောင်မဟုတ်ရင်ကင်မရာ flash ကိုအလိုအလျှောက်ပိတ်သွားလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကခွင့်ပြုချက်, အိပ်ပျော်ခြင်း mode သို့သွားလို device ကိုတားဆီးဖို့လက်နှိပ်ဓာတ်မီးများကလိုအပ်ပါသည်။
hardware ထိန်းချုပ်မှု, ဓါတ်ပုံတွေကိုယူ:
ဒီလက်နှိပ်ဓာတ်မီးကိုသာကင်မရာကိုကျော်ဝင်ရောက်နိုင်အလင်းအရင်းအမြစ်အဖြစ်ဦးဆောင်သည့်ကင်မရာ flash ကိုအသုံးပြုသည်ဖြစ်သောကြောင့်ဤခွင့်ပြုချက်, လိုအပ်သောဖြစ်ပါတယ်။ တချို့ devices များတွင်ကဦးဆောင်အလုပ်လုပ်ရနိုင်ရန်အတွက်အဆင့်မြင့် features တွေ (ဥပမာ Auto-focus) ကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သောပါပဲ။ အဘယ်သူမျှမဓါတ်ပုံတွေကိုယူနေကြတယ်, မစိုးရိမ်ပါ!
hardware ထိန်းချုပ်မှု, ထိန်းချုပ်ရေးလက်နှိပ်ဓာတ်မီး:
ဤသည်လက်နှိပ်ဓာတ်မီးကို flash ဦးဆောင်သည့်ကင်မရာ၏အရောင်သည်အလင်းကိုထိန်းချုပ်ရန်ဤခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သည်။
ဤသည်လက်နှိပ်ဓာတ်မီးမြင့်မားသော resolution display နဲ့အတူ device များအတွက် high resolution ကတော့ပုံရိပ်တွေပါရှိသည်။ သို့သော်ထိုသို့ sdcard ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားနိုင်ပါတယ်, ဒါကြောင့်အရွယ်အစားပြဿနာတစ်ခုမဖြစ်သင့်ပါတယ်။
ဤသည်လက်နှိပ်ဓာတ်မီးကိုသာအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကြော်ငြာအခမဲ့နိုင်ပါတယ်။ သူတို့က developer များ၏တစ်ခုတည်းသောဝင်ငွေစီးဖြစ်ကြောင်း, ဒါကြောင့်သူတို့ကိုပိတ်ဆို့ကြဘူးပါ။
အဘယ်ကြောင့်ဒီအလက်နှိပ်ဓာတ်မီးဒါမကြာခဏ updated ရရှိသနည်း?
ဒီလက်နှိပ်ဓာတ်မီးများအတွက်အပ်ဒိတ်များဘာဂ်အသစ် features တွေနဲ့ဦးဆောင်သည့်ကင်မရာ flash ကိုသမရိုးကျလမ်းအတွက်ဝင်ရောက်မရနိုငျသောမဟုတ်တဲ့စံ device များအတွက်ထို့ပြင်ပြသနာကိုကျော်လွှားနိုင်စေရန်ဆံ့။
ဘယ်လိုလုပ်ဒီလက်နှိပ်ဓာတ်မီး၏ developer များဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်နိုင်မလဲ?
သင်ဤလက်နှိပ်ဓာတ်မီးနှင့် ပတ်သက်. အကြံပြုချက်များသို့မဟုတ်မေးခွန်းများရှိပါကတိုက်ရိုက် app ကိုအတွင်းရှိအစီရင်ခံ system ကိုကျော်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
နိုဝင်ဘာလ 14, 2014 မှာ 2: 49 ညနေ
ဒီ app ဆက်ဆက်အကောင်း .Thnx ပါ!
ဧပြီလ 10, 2014 မှာ 6: 14 နံနက်
သို့တိုင်ဒေါင်းလုပ်ငါကအသုံးပြုခဲ့ပေမယ့်ယခုအချိန်အထိကပဲရိုးရှင်းစွာအပေါငျးတို့သမျှော်လင့်ထိတွေ့စူပါလိုအပ်ပါလိမ့်မည်ငါသည်သင်တို့ကိုအပေါ်ဒီတော့သုစရိုက်ကိုမုန်းမပါ install သို့မဟုတ်အခြားနိမိတ်လက္ခဏာကိုတက်ကင်လုပ်ခိုင်းစုန်းဖူးခြင်းမရှိအနတ္တတခြားသူတွေနဲ့ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်ကြောင်းတစ်ခုတည်းသော app တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်သင်ပြန်လည်သုံးသပ်ပေးတော်မူမည် အချို့ကွောငျကလေးမှီဝဲတယ်ငါ Chow ခန့်မှန်းအကူအညီနဲ့တယ်